What's So Good About Good Friday? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
1. राम्रो शुक्रवार किनभने येशूले आफ्नो मृत्यु मार्फत पूरा के को राम्रो छ
जब हामी सबै भन्दा मृत्यु दृष्टिकोण, हामी हाम्रो जीवन काम को अन्त आउने र शान्तिपूर्ण बाँकी आशा हुनुहुन्छ. तर येशूले क्रूसमा जाँदा, उहाँ आफ्ना जीवनका काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग सुरु भएको थियो. येशूको मृत्युको एक दिल को धडकन को अन्त भन्दा बढी थियो; यो पापीहरूलाई बचाउन परमेश्वरको योजना को कार्यान्वयन थियो. येशू परमेश्वर हामीलाई अलग पाप मा लिन समाधान, वा पावलले यसलाई भनेझैं, येशू, "उहाँको पार रगत द्वारा शान्ति बनाउन" (कलस्सी 1:20).
गलाती को bittersweet शब्दहरू सुन्न 3:13, "ख्रीष्टको लागि श्राप बनेर व्यवस्था को श्राप बाट हामीलाई उद्धार हामीलाई-लागि यो लेखिएको छ, " 'श्राप रूख मा फाँसी भएको छ सबैलाई छ'
आफ्नो निर्दोष हुँदाहुँदै, येशू ख्रीष्ट पापीहरू को ठाउँमा उभिए, र हामी कमाएका गर्नुभएको न्याय गरे.
1 पत्रुस 3:18 भन्छन्, "ख्रीष्टको लागि पनि पापको लागि एक पटक भोगे, अधर्मी लागि धार्मिक, उहाँले परमेश्वरको हामीलाई ल्याउन सक्छ ... "
परमेश्वरको पुत्र मृत्यु दिइयो कि दिन राम्रो दिन भन्न सकिन्छ, यसलाई हामी जीवित छन् किनभने!
2. यो कथा को अन्त छैन किनभने राम्रो शुक्रवार राम्रो छ
परमेश्वरले उहाँलाई खडा, मृत्युको pangs loosing, यो सम्भव थिएन किनभने लागि उहाँलाई यो द्वारा आयोजित गर्न. (प्रेरित 2:24)
येशूको शरीर कमजोर र बेजान रहन थिएन. आइतबार बिहान, उहाँले शक्ति र महिमा को grave- पूर्ण देखि हुर्केका थिए. उहाँले देखेको थियो, शरीरका मा, उनको मृत्यु पछि सयौं, र चाँडै पछि आकाश मा जानुभयो.
येशूले चिहानबाट पुगेको थियो भने, त्यसपछि हामी यो "राम्रो शुक्रवार।" कल गर्न सक्दैन येशूले गम्भीर मा अझै पनि थियो भने, म बिल्कुल कुनै आशा हुनेछ. हाम्रो भङ्ग संसारको लागि Fallen मानिस वा पुनर्स्थापना लागि उद्धार कुनै आशा हुनेछ. तर हामी उहाँले खडा गरिएको छ भनेर थाह, र यो हामीलाई रमाउने र उहाँलाई भरोसा गर्न कारण दिन्छ.
आफ्नो dirges र आफ्नो R.I.P. गरेको बचत, किनभने येशू ख्रीष्ट अब मरिसकेको छ. उहाँले जीवित र राम्रो छ, र उहाँले सर्वोच्च शासनकालमै! राम्रो शुक्रवार तपाईं र म जस्तै पापी लागि राम्रो समाचार हो.
dempsey tapley • अगस्ट 19, 2013 मा 8:44 छु • जवाफ
एम्बर • मार्च 19, 2015 मा 10:17 बजे • जवाफ
प्रेम यो! म लगभग यो पढ्दै छु2वर्ष पछि, तर यो निश्चित मेरो पढ्ने लायक थियो र यो मलाई प्रशंसा र आशा बस प्रेरित सबै परमेश्वर मलाई र र येशू ख्रीष्टमार्फत मेरो परिवारको लागि भण्डारमा छ भविष्यमा लागि थप! येशू नाममा, आमिन!